ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်း ဦးဆောင်သည့် မြန်မာ့တပ်မတော် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ချစ်ကြည်ရေးခရီးထွက်ခွာ | cincds
ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်း ဦးဆောင်သည့် မြန်မာ့တပ်မတော် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ချစ်ကြည်ရေးခရီးထွက်ခွာ
နေပြည်တော်၊ နိုဝင်ဘာ- ၁၂
ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ထိုင်းဘုရင့်ကြည်းတပ်ဦးစီးချုပ် General Apirat Kongsompong ၏ဖိတ်ကြားချက်အရ ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (ကြည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်း ဦးဆောင်သော မြန်မာ့တပ်မတော် ချစ်ကြည်ရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ချစ်ကြည်ရေးခရီး သွားရောက်ရန်အတွက် ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် နေပြည်တော်လေဆိပ်မှ ထွက်ခွာကြသည်။
ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဦးဆောင်သည့် မြန်မာ့ တပ်မတော်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ညှိနှိုင်းကွပ်ကဲရေးမှူး (ကြည်း၊ရေ၊လေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြထွန်းဦးနှင့် ဇနီး၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးမှ တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ နှင့်ဇနီးများ၊ နေပြည်တော် တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး၊ ထိုင်းနိုင်ငံသံရုံးမှ သံမှူးကြီး Mrs Kanokwan Pengsuan၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ထိုင်းနိုင်ငံရေတပ်စစ်သံမှူး Capt. Chawanwit Phungsai နှင့်ဇနီး နှင့်တာဝန်ရှိသူများက လေဆိပ်တွင် ပို့ဆောင် နှုတ်ဆက် ကြသည်။
ထို့နောက် ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်းနှင့်အဖွဲ့ဝင်များသည် ထိုင်းဒေသစံတော်ချိန် နံနက် ၁၀ နာရီခွဲ ခန့်တွင် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဘန်ကောက်မြို့ရှိ ထိုင်းဘုရင့်လေတပ်၊ Wing6လေဆိပ်သို့ ရောက်ရှိကြရာ ထိုင်းဘုရင့်တပ်မတော် ကြည်းတပ်ဦးစီးချုပ်ရုံးမှ ထောက်လှမ်းရေး ညွှန်ကြားရေးမှူး Lieutenant General Chairat Changkaew နှင့် ဇနီး၊ ထိုင်းနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ မြန်မာနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး ဦးမျိုးမြင့်သန်းနှင့် ဇနီး၊ မြန်မာစစ်သံ(ကြည်း၊ရေ၊လေ) ဗိုလ်မှူးချုပ် ခင်ဇော် နှင့်ဇနီး၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ထိုင်းနိုင်ငံစစ်သံမှူး Senior Colonel Saranyaris Satthiwajchinadej နှင့်ဇနီး တို့က လေဆိပ်တွင် ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ခဲ့ကြ ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ဒုတိယတပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ(ကွညျး) ဒုတိယဗိုလျခြုပျမှူးကွီး စိုးဝငျး ဦးဆောငျသညျ့ မွနျမာ့တပျမတျော ကိုယျစားလှယျအဖှဲ့ ထိုငျးနိုငျငံသို့ခဈြကွညျရေးခရီးထှကျခှာ
နပွေညျတျော၊ နိုဝငျဘာ- ၁၂
ထိုငျးနိုငျငံ၊ ထိုငျးဘုရငျ့ကွညျးတပျဦးစီးခြုပျ General Apirat Kongsompong ၏ဖိတျကွားခကျြအရ ဒုတိယတပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ (ကွညျး) ဒုတိယဗိုလျခြုပျမှူးကွီး စိုးဝငျး ဦးဆောငျသော မွနျမာ့တပျမတျော ခဈြကွညျရေး ကိုယျစားလှယျအဖှဲ့သညျ ထိုငျးနိုငျငံသို့ ခဈြကွညျရေးခရီး သှားရောကျရနျအတှကျ ယနနေံ့နကျပိုငျးတှငျ နပွေညျတျောလဆေိပျမှ ထှကျခှာကွသညျ။
ဒုတိယတပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ(ကွညျး) ဦးဆောငျသညျ့ မွနျမာ့ တပျမတျောကိုယျစားလှယျအဖှဲ့အား ညှိနှိုငျးကှပျကဲရေးမှူး (ကွညျး၊ရေ၊လေ) ဗိုလျခြုပျကွီး မွထှနျးဦးနှငျ့ ဇနီး၊ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျရုံးမှ တပျမတျောအရာရှိကွီးမြား နှငျ့ဇနီးမြား၊ နပွေညျတျော တိုငျးစဈဌာနခြုပျ တိုငျးမှူး၊ ထိုငျးနိုငျငံသံရုံးမှ သံမှူးကွီး Mrs Kanokwan Pengsuan၊ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ ထိုငျးနိုငျငံရတေပျစဈသံမှူး Capt. Chawanwit Phungsai နှငျ့ဇနီး နှငျ့တာဝနျရှိသူမြားက လဆေိပျတှငျ ပို့ဆောငျ နှုတျဆကျ ကွသညျ။
ထို့နောကျ ဒုတိယတပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ(ကွညျး) ဒုတိယ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး စိုးဝငျးနှငျ့အဖှဲ့ဝငျမြားသညျ ထိုငျးဒသေစံတျောခြိနျ နံနကျ ၁၀ နာရီခှဲ ခနျ့တှငျ ထိုငျးနိုငျငံ၊ ဘနျကောကျမွို့ရှိ ထိုငျးဘုရငျ့လတေပျ၊ Wing6လဆေိပျသို့ ရောကျရှိကွရာ ထိုငျးဘုရငျ့တပျမတျော ကွညျးတပျဦးစီးခြုပျရုံးမှ ထောကျလှမျးရေး ညှနျကွားရေးမှူး Lieutenant General Chairat Changkaew နှငျ့ ဇနီး၊ ထိုငျးနိုငျငံ ဆိုငျရာ မွနျမာနိုငျငံသံအမတျကွီး ဦးမြိုးမွငျ့သနျးနှငျ့ ဇနီး၊ မွနျမာစဈသံ(ကွညျး၊ရေ၊လေ) ဗိုလျမှူးခြုပျ ခငျဇျော နှငျ့ဇနီး၊ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ ထိုငျးနိုငျငံစဈသံမှူး Senior Colonel Saranyaris Satthiwajchinadej နှငျ့ဇနီး တို့က လဆေိပျတှငျ ကွိုဆိုနှုတျဆကျခဲ့ကွ ကွောငျး သတငျးရရှိသညျ။